185 visiteurs - 337 pages vues
352281 visiteurs - 863942 pages vues
Nisy mompera hono zany manana mpiasa anankiroa: Bernard sy Bernadette! Dia isaky ny tsy eo Bernard dia petahan’ny mompera foana Bernadette! Nony farany kobon’ny Bernard ny fikany! Dia nanalàny ny fony dia nohaniny daholo ny kominio an’i mom......pera!
Tezitra tamin’izay mompera fa tsy hita daholo ny kominio any dia nantsoiny Bernard:
M: Bernard, avia ianao mikofesy!!!
Dia nankao amin’ilay trano kely fikofesena i Bernard!
M: Bernard, iza no nangalatra ny kominio an’i mompera
B: maninona an?????
M: iza no nangalatra ny kominio an’i mompera hoa????
B: maninona tsara mompera â????
M: efa hoe iza no nangalatra ny kominio an’i mompeeeeraa hoa????
B: tena tsy maheno mihitsy ato ambadika ato mompera fa mivadia ange ianao ato dia zà no ho ao ary jerenao raha maheno ato na tsy maheno eeee
Dia nifamadika hono i mompera sy Bernard
M: teneno amin’izay ary ahenoko an’izany tsy maheno zany, raha maheno zà an, dia voaroaka ianao androany!
Dia hoy Bernard: mompera, iza no nangalatra ny vadin’i Bernard ?
M: ......:!!?? Tena tsy maheno marina ato ry Bernard fa azafady, sady niala pà lery!
Andro harivariva, nitsangatsangana hono ireto mpifankatia dia nipetraka teo ambony tamboho nijery ny masoandro mody sy ny vodilanitra mahafinaritra dia mahafinaritra loko.
Dia nalefan’ilay tovolahy manodidina ny sorok’I sipa ny sandriny dia hoy izy mibitsibitsy tamin’ny sofony mba tsy hanakontaba ny feelling-dramatoa nijery ny masoandro mody : fantatro ny eritreritrao. Dia hoy ramatoakely, sady midongy fiteny: ianaoooooo koaa vetavata â !
Fiainam-pianakaviana iray, izay misy rafozam-bavin'ilay rangahy loaham-pianakaviana. Raha tiana hono ny vady dia ny rafozana no tsinjovi-mandeha. Tsapan'ity Ramatoa fa ohatry ny mampijaly ny vadiny loatra ny Reniny ka dia nitady hevitra mba hialasasatra kely tsy misy ny Reniny izy roa. Tapaka ary ny hevitra fa any Jerosalema izy roa no handeha haka rivotra. Nambara ity Reny fa tsy afaka ny hitondra azy izy roa noho ny frais lafo loatra. Tsy nanaiky anefa ity Reniny fa te-handeha hono izy, fa raha ohatra ka tsy zakanareo hoy izy ny frais-ko dia izaho ihany no mandoha azy. Tsy nisy azo atao na dia efa nanantena aza rangahy fa ho afaka amin' fampinjalian'ity rafozany. Tonga tany Jerosalema izy telo mianaka, ary dia tsy niova tahaka ny isan'andro ny fiainana tany. Noho ny akaiky hody anefa dia nindaosin' fahafatesana ilay Reny. Tonga ny olana. Hoy ny tompon-tany hoe : "tsy aleonareo aty no halevina toy izay any, satria lafo be ny mitondra faty mody noho ny mandevina azy aty?"
Ramatoa: Marina tokoa izany Rangahy, aleo aty izy no milevina.
Rangahy: Niheritreritra teo izy, ary dia tsy nanaiky mihitsy fa ho entina mody ny razana.
Ramatoa: Aleo re izy aty fa tsy maninona a!
Rangahy: an an an tsy maitsy entina mody izy.
Ramatoa: Fa inona anefa ny antony e?
Rangahy: Koa efa nisy an' izany Jesosy izany anie taty
Ramatoa: Dia manino?
Rangahy: Ka raha aty izy no milevina dia mety mbola hitsangana anie!